အကယ်၍ သင်သည်ပြင်သစ်စျေးကွက်တွင်လောင်းကစားလိုသူတစ် ဦး ဖြစ်ပါက, သငျသညျအားကစားလောင်းကစားကိုစိတ်ဝင်စားပါလိမ့်မယ်, ပြင်သစ် Pari ကမ်းလှမ်းမှုကို. ငြိမ်းချမ်းရေးတွင်အားကစားအတွက်လောင်းကစားခြင်းအတွက်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကိုပေးသည်, နှင့်သိသာထင်ရှားသောအားသာချက်ရရှိရန်ကြိုးစားပါ. ပြင်သစ် Pari Sportif ကမ်းလှမ်းချက်နှင့် ပါတ်သက်၍ သင်သိရမည့်ဆောင်းပါးငယ်တစ်ခုဤတွင်ဖြစ်သည်.
မတူကွဲပြားသောအားကစားဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းအမျိုးအစားများကို France Pari တွင်ပြုလုပ်သည်
သင်သည်စာအုပ်စာပေလောကတွင်အတွေ့အကြုံရှိသူ၊ အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်သည်, သငျသညျပေါင်းစပ်ရိုးရှင်းတဲ့ပဲရစ်နှင့်ပဲရစ်အကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်. ဤအလွှာနှစ်မျိုးသည်အဓိကအားဖြင့်ဤပလက်ဖောင်းတွင်တွေ့နိုင်သည်, အမြဲတမ်းနှစ်ခုအကြားချိန်ခွင်လျှာအတူ. ပို၍ ကျိုးနွံသောလောင်းခြင်းဖြင့်နည်းနည်းခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်မည်၊ သို့မဟုတ်ပါက“ ကျေးဇူးပြု၍” ဟုပြောပါကအဓိကအဆင့်မြှင့်ခြင်းနှင့်ပေါင်းခြင်းလောင်းခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
အကယ်၍ သင်သည်ဘောလုံးအားကစားလောင်းကစားခြင်းတွင်မပါ ၀ င်ပါက, ပြင်သစ်မှာမင်းကမြင်းပြိုင်ပွဲကိုလောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာမင်းသိတယ်. အမှန်စင်စစ်, ပြင်သစ်သည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးပြိုင်ပွဲတွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားခြင်းကိုကမ်းလှမ်းသည်, အကယ်၍ သင်သည်ဤနယ်ပယ်၌ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်မိမိကိုယ်ကိုအနာတရဖြစ်အောင်လုပ်ရန်ငွေမရှိဘဲ. သင်လယ်ပြင်၌ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်တဲ့အခါ, အလောင်းအစားမြင်းသည်အမှန်တကယ်ကောင်းသောသွေးပြန်ကြောကိုကိုယ်စားပြုနိုင်သည်. ထည့်သွင်းရန်မှာဤအလောင်းအစားသည်ပြင်သစ်ပါရီမိုဘိုင်း application များကိုလည်းပေးသည်.
သင်၏ပထမဆုံးလောင်းကစားရှုံးလျှင်သတိပြုပါ, နှင့်သင်၏အပိုဆုအကောင့်, မင်းလက်ခံတယ် 20% ရလဒ်များ၏အတည်ပြုချက်အပြီးရောင်းချခြင်း၏ 80% သင်၏အကောင့်အတည်ပြုပြီးနောက်ကျန်ရှိသော.
ထို့နောက်, ပယ်ဖျက်ဖို့မျှော်လင့်ဖို့ဆုကြေးငွေပမာဏကိုအနည်းဆုံးသုံးကြိမ်ဖတ်ရန်လိုအပ်သည် (အနည်းဆုံး 1h10 ဖြစ်နိုင်ခြေ).
အဆိုပါ site ကိုလည်းတိုက်ရိုက်အားကစားလောင်းကစားပေးထားပါတယ်, ဒီခေါင်းစဉ်မှဆက်ကပ်အပ်နှံအထူးအပိုင်းနှင့်အတူ. ဒါဟာသင်တိုက်ရိုက်ပွဲစဉ်ကိုလိုက်နာရန်ခွင့်ပြုပါတယ်, နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာအလောင်းအစား, Real-time စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူ. ဤပြောင်းလဲမှုသည်သင်၏အလောင်းအစားများကိုစီမံရန်လိုအပ်သည်, သူတို့အမြင့်သို့ရောက်ရှိအဖြစ်အခွင့်အလမ်းကိုယူ.
ထို့အပြင်, ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပဲရစ်မှာပြောပါ, ပဲရစ်မှာငွေသွင်းတဲ့နည်းအမျိုးမျိုးကိုငါတို့တောင်မှမပြောဘူး. သငျသညျရိုးရှင်းတဲ့လွှဲပြောင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်, ဥပမာ MasterCard နှင့် Visa တို့ဖြစ်သည်. သို့သော် အကယ်၍ သင်သည်ဤနည်းလမ်း၏ကြီးမားသောပရိသတ်မဟုတ်ပါ, သင်၏အလောင်းအစားများကိုအီလက်ထရောနစ်ပိုက်ဆံအိတ် (သို့) ကြိုတင်ငွေဖြည့်ကဒ်ဖြင့်လည်းလောင်းနိုင်သည်, သူလည်းငွေပေးချေမှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌၎င်းတို့၏အားသာချက်များရှိသည်. သင်နှင့်အသင့်တော်ဆုံးသောနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ရန်မှာသင့်အတွက်ဖြစ်သည်!
သင်ပြင်သစ် Pari platform ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်တဲ့အခါ, သင်ပထမ ဦး ဆုံးမှတက်မှကြိုဆိုဆုကြေးငွေကိုလက်ခံရရှိရမည်ကိုသတိပြုပါ 200 €, dont 50 €မြင်းပေါ်လောင်းနှင့်ပဲရစ်အားကစားအတွက်လောင်းကစား. သို့သော်, ပလက်ဖောင်းသည်၎င်း၏အသုံးပြုသူများကိုအခြားအပိုဆုများနှင့်ပရိုမိုးရှင်းကမ်းလှမ်း. အချို့သောဂိမ်းများတွင် freebet ပေးထားသောကိစ္စကိုကျွန်ုပ်တို့အထူးဖော်ပြနိုင်သည်, လိဂ်စစ်ဆင်ရေးများအတွက်ဥပမာ 1 အများအပြားအများအပြားပြိုင်ပွဲများတွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်, လက်ရှိ Rugby ကမ္ဘာ့ဖလားနှင့်အတူဖြစ်သကဲ့သို့. သင်၏အနိုင်ရရှိမှုများပိုမိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်မြင့်တက်လာသည်ကိုမြင်ရန်အတွက်အစည်းအဝေးများအတွက်အဆင့်သတ်မှတ်ရန်လောင်းကစားခြင်းကမ်းလှမ်းခြင်းကိုမကြာခဏအားပေးလေ့ရှိသည်. အထူးနှုန်းများကုဒ်ရှိပါသလားသိလား? အရောင်းမြှင့်တင်ရေးကုဒ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြင်သစ်ပါရီတွင်လေ့လာပါ.
ပြင်သစ်အလောင်းအစားများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည့်အရာ. အကယ်၍ သင်စိတ်ဝင်စားပြီးအွန်လိုင်းလောင်းချင်လျှင်, သင်၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကိုရှာဖွေရန်သွားရန်တွန့်ဆုတ်မနေပါနှင့်. သင့်အလှည့်!
ပြင်သစ်ပါရီတွင်အပိုဆုကြေးယူရို ၅၀ အထိပျော်ရွှင်ပါ
5 €ကနေကမ်းလှမ်းခဲ့သည် 50 လုပ်ထားသောမြက်ပင်
အပိုဆောင်း5€ရန် 150 €မြင်း paris
15% ပဲရစ်ကနေသင်မြက်ခင်းအထိပေးဆောင် 40 €
အတွင်းအလောင်းအစားများသာ 30 မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြသည်.
ကင် : အထိ€ 50 ပြန်အမ်းငွေ
25% သင်ကမ်းလှမ်းမှုအတွက်လုပ်သောဇယားကွက်၏ (အများဆုံး 50 €). ဒီကမ်းလှမ်းချက်သည်တရားဝင်သည် 30 သင့်ပထမ ဦး ဆုံးငွေသွင်းပြီးနောက်ရက်ပေါင်း. သင်ပျော်မွေ့လိုပါကအချိန်မဆွဲပါနှင့်.
ဒီအပိုဆုကိုအလိုအလျောက်ပေးဆောင်မှာမဟုတ်ပါဘူး. ပြင်သစ်ပါရီဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုသင်တောင်းဆိုရမည် (ဖုန်းသို့မဟုတ်စာဖြင့်) သူတို့ရဲ့အကောင့်ကိုအတည်ပြုကြသူကစားသမားအဘို့ဖြစ်၏ (ရေကြောင်းဖြတ်ပိုင်းနှင့် activation ကုဒ်ရိုက်ထည့်အပေါ်သို့)
FP စီမံခန့်ခွဲမှု : အထိ€ 50 ပြန်အမ်းငွေ
အပိုဆုဇယားကွက်နှင့်စပ်လျဉ်း, 25% အဆိုပြုထား updated FP Manager ကို (အများဆုံး 50 €). ဒီကမ်းလှမ်းချက်သည်တရားဝင်သည် 30 သင့်ပထမ ဦး ဆုံးငွေသွင်းပြီးနောက်ရက်ပေါင်း. ဒါကြောင့်ငါတို့အမြန်အကျိုးရှိနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်.
ပြန်လည်ထူထောင်ရန်, ပင်ဇယားကွက်စီမံခန့်ခွဲရန်. ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြင်သစ်ပါရီ၏ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုတောင်းခံနိုင်ရမည်. ၎င်းသည်၎င်းတို့၏ကစားသမားအကောင့်ကိုပြီးဆုံးသောကစားသမားများအတွက်လည်းသီးသန့်ထားရှိပါသည်. ထို့ကြောင့်, သင်၏စာရွက်စာတမ်းများကိုလျင်မြန်စွာပို့ရန်မမေ့ပါနှင့်.
Previous Previous post: Osiris ကာစီနို